Ny vovony 10 Steroids Soavids malaza indrindra amin'ny 2019
Isika rehetra dia afaka manaiky fa ny fananganana vatana dia iray amin'ireo fomba fanao taloha indrindra hanatsarana ny fijerin'ny olona indrindra, indrindra fa ny lehilahy. Raha samy mijery valim-pitiavana hafa ny tsirairay, ny tenim-piraisana iraisana dia ny hoe te-hijery tsara kokoa ny tsirairay, handoro tavy fanampiny ary manampy hozatra bebe kokoa. Ho an'ny vehivavy, ny famerenana amin'ny laoniny ny vehivavy tsara tarehy dia antenaina miandry aorian'ny fanatanjahan-tena. Mba hahatratrarana an'izany, tsy maintsy misafidy ny tsara ianao Steroid anabolika (AAS) hanatanteraka izay tianao.
Namorona ny torolàlana ity mpividy ity izahay feno ny toro-hevitra sy ny toro-hevitra ambony indrindra hanampiana anao hisafidy ny lavorary Fampitaovana anabolika (AAS) akora manta.
Fivarotana mafana Steroids Raw Akora Most Ny naratra malaza Steroids Raw Akora Fitaovana akora sôpôra farany tsara indrindra
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny vokatra ara-barotra stéroid lehibe indrindra avy amintsika nandritra ny taona lasa
Ny fototra sy ny soso-kevitra voapoizina nampidirina
Ny fanenanana mora indrindra sy mora indrindra indrindra amin'ny steroids steroid
Ny steroïde mifamaly sy be fiahiana indrindra eny an-tsena.
Ny fitambaran-dalamby malaza indrindra amin'ny atleta fampisehoana
Trenbolone Acetate dia matanjaka noho ny Trenbolone Enanthate noho ilay estetika Enanthate izay naka masobe betsaka tamin'ny famolavolana.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mandeha voalohany amin'ny hormonina Trenbolone dia ny Trenbolone Acetate foana.
Ny mpividy indrindra dia mahazo tombony amin'ny steroids
I Dianabol dia mety hahazo tombony be amin'ny fananganana faobe.
Ny vokatry ny Dianabol dia mora mihazona azy indray mandeha raha tsy averina raha oharina amin'ny steroid.
Ireto ny Raw 10 Steroids malaza indrindra:
Ny anarana Steroid anabolika malaza indrindra
Ny safidy steroid malaza indrindra dia:
Ny vovony Dianabol (methandrostenolone)
Deca Durabolin (nandrobona decanoate powder)
Ny vovoka Winstrol (stanozolol)
Ny anarana Steroid anabola mandaitra indrindra
Amin'ny salan'isan'ny mpampiasa, ny steroida mahomby indrindra dia:
Vovoka Trenbolone (mpandresy mazava)
Hormone mitombo ny olombelona (HGHraw)
Fahatakarana karazana hôpôbôa anabolika
Misy karazany vitsivitsy voafaritra tsara hojerena rehefa misafidy Steroids anabolika. Afaka manomboka amin'ny alàlan'ny fampitahana ny tanjona samihafa hisafidianana ilay lavorary ho an'ny tenanao.
Misafidy karazan'asa samihafa ny olona:
fitenonam-bola be momba ny fananganana hozatra
steroids fampisehoana ho an'ny tanjaka sy ny fiaretana
manapaka tavy amin'ny fandoroana tavy
Antony hafa ampiasaina dia ny fanasitranana sy fanarenana sy fanatsarana ny metabolisma.
Ho an'ny tanjona ara-pitsaboana sy tsy ara-dalàna, ny AAS dia azo raisina:
tahaka ny volon-tsavony ao anaty hoditra
amin'ny alalan'ny hoditra toy ny crème na gel
Ny vava am-bava dia nakan'ny vava. Anisan'izy ireo:
Mesterolone (vovoka Proviron)
Methandienone (dibera Dianabol)
Oxandrolone (vovoka Anavar)
Oxymetholone (vovony Anadrol)
Stanozolol (vovoka Winstrol)
Anisan'ireo endrika tsy azo ihodivirana:
Trenbolona Acetate vovoka
Ampitahao amin'ny 2019 ny Steroids anabolika malaza indrindra
Product anarana Testosteorne Enanthate vovony Dianabol vovoka Trenbolona Acetate vovoka Vovoka Anavar (Oxandrolone) Stanozolol poids Ny fitomboan'ny olombelona Hormone raw Nandrolone Decanoate vovoka Boldenone Undecylenate raw Ny vovony Drostanolone Propionate Vovonan'aretin-tavoahangy metenolone
fanapahana ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Ny 10 momba ny Steroid Anabolika malaza indrindra anay
Ny Steroids malaza indrindra
1: vovony testosterone
Ny testosterone dia ny anabolic steroid lehibe indrindra izay vokarin'ny vatanao amin'ny fomba voajanahary. Ary raha ity steroid ity dia mazava ho azy fa manampy amin'ny famolavolana hozatra masculine sy tanjaka azonao, dia tompon'andraikitra amin'ny toetran'ny lahy hafa toy ny feonao lalina sy ny volonao. Rehefa ampiasaina ho fanafody fampitomboana ny fampisehoana dia hanampy ny fitomboan'ny haben'ny tanjaka sy ny tanjaky ny hozatrao, ny fampihenana ny fahasimban'ny hozatra ary ny fampitomboana ny fanarenana ny hozatra.
Testosterone miaraka amin'ny ezetera efa ela
Ny endrika mahazatra indrindra dia nampiasa ny tontolon'ny atleta fampiroboroboana
2: vovony Trenbolone
Trenbolone dia heverina ho be mpitia indrindra amin'ny iray amin'ny steroola anabolika matanjaka indrindra nohariany. Raha ny marina dia dimy heny mahery noho ny testosterone noho ny tahan'ny androgen of 500 amin'ny 500 raha oharina amin'ny an'ny 100 amin'ny 100. Ho an'ny bodybuilders, indrindra, ity dia steroid malaza satria tsotra fotsiny dia afaka manangona hozatra ho an'ny hozatra sy ny tanjaka izy ireo. Izy io dia mahasoa ireo maniry ny handoro matavy haingana kokoa noho ny voajanahary.
Ny tena sôkôlôjian'ny Trenbolone
Matetika ny soso-kevitra isan'andro no atolotra
Ny mahasoa indrindra amin'ireo mitady fitadiavam-bola
3: vovony Anavar (Oxandrolone)
Anavar dia iray amin'ireo amorohoro amabolika amabolika malaza indrindra amin'ny vanim-potoana rehetra, ary izany dia vokatry ny natiora malemy. Ity dia iray amin'ireo steroids anabolic vitsivitsy izay azo ampiasaina amina lehilahy sy vehivavy azo antoka, ary iray ihany koa ny vokatra faran'izay mampiavaka azy. Na dia izany aza, any amin'ny faritra sasany, i Anavar dia tena tsy atahorana noho ny maha-malemy azy, fa amin'ny ankapobeny kosa noho ny tsy fisian'ny fanantenana.
Ny steroids malaza indrindra amin'ny anabolika amin'ny fotoana rehetra
Amin'ny ankapobeny, noho ny natiora tsara tantanana
Ireo steroidana anabolic vitsivitsy izay azo ampiasaina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy
Tena tsy hay hadinoina noho ny fahalemeny
4: vovony Nandrolone Decanoate
Ny Nandrolone Decanoate dia iray amin'ny steroola anabolika tena be mpampiasa eo anelanelan'ireo mpanao fanatanjahantena mampitombo ny fampisehoana. Malaza noho ny fantsom-pifandraisana matanjaka amin'ny vanim-potoana tsy manam-paharoa io, fa ankafiziny ihany koa amin'ny faribolana ara-panatanjahantena maro ho an'ny tombony mahasitrana azy. Noho ny tombony azo avy amin'ny fitsaboana mahasoa, ny hormonina Nandrolone dia iray amin'ny steroola anabolika mahasoa indrindra amin'ny fampiharana ara-pitsaboana.
Ny steroïd ny anabolika ampiasaina indrindra amin'ny atleta fampiroboroboana
Fantatra tsara amin'ny maha-steroid be loatra azy
Iray amin'ireo fitsaboana anabolika mahasoa indrindra amin'ny fitsaboana
Boldenone Undecylenate dia testosterone nateraky ny androgen andrôlôtika androgen ary endrika testosterone namboarina ara-drafitra. Tena fiovana kely izy io eo amin'ny fehezan-droa fanampiny misy eo amin'ny toerana roa sy roa. Ny estec Undecylenate dia mamela ny famoahana haingam-pandeha amin'ny Boldenone eo ho eo amin'ny 3-4 andro aorian'ny tsindrona, miaraka amin'ny famotsorana tsimokaretina tsy tapaka amin'ny hormonina hanaraka ny andro 21.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ity steroid ity dia ny fahafahany manome hery ny vatana
Ny raibe amin'ny steroide anabolic rehetra
Iray amin'ireo steroides azo itokisana indrindra avy amin'ny atleta matihanina sy mpanao biriky
6: vovony Dianabol
I Dianabol dia maneho ny iray amin'ireo malaza indrindra ary iray amin'ireo steroola anabolic tena manan-danja amin'ny fotoana rehetra. Tsy isalasalana fa ity no steroida am-bava malaza indrindra hatramin'izay namely ny tsena sy iray amin'ireo steroida malaza indrindra amin'ny endriny rehetra. Na dia saika hita foana ho toy ny takelaka am-bava aza, i Dianabol dia azo jerena ho vahaolana tsy azo tsoahana, fa ny takelaka kosa dia maneho ny làlan'ny fitantanana voalohany.
Ny steroids anabolic indrindra amin'ny fotoana rehetra
Ny steroid malaza indrindra amin'ny tsirin-drivotra mba hitsikerana ny tsena
Ny steroids matetika nomen'i Arnold
7: vovony Stanozolol
Raha ny iray amin'ny steroida anabolic malaza indrindra, i Stanozolol dia be mpitia amin'ny ankamaroan'ny ao amin'ny steroid mampiasa mponina. Amin'ny fomba maro dia steroida anabolic malefaka malefaka izay azon'ny lehilahy sy ny vehivavy ampiasaina azo antoka. Mitovy ny zava-dehibe, voaporofo fa tena mahomby amin'ny ezaka fampitomboana ny fampisehoana.
Ny steroïde ho an'ny anabolika malaza
Ny malaza indrindra amin'ny ankamaroan'ny steroid mampiasa ny mponina
Ny steroide anabolic izay azo ampiasaina amin'ny lehilahy sy ny vehivavy azo antoka
Tena mahomby amin'ny fanatsarana ny tetik'asa
8: Zava-maniry mitombo ny olombelona
Ny Hormone ny Handrokan'olombelona dia hormone proteinina novokarin'ny vavon-jatony. Izy io dia novokarin'ny olona velona rehetra, ary eo amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fahazazany. Ny HGH dia iray amin'ireo hormones manan-danja indrindra amin'ny vatan'olombelona, ​​satria misy fiantraikany amin'ny taolantsika, ny taolam-patany sy ny taova anatiny, ary ny anjara asany amin'ny faritra maro manerana ny vatana.
Ny hormonina proteinina novolavolain'ny vozona fanjono
Ny malaza amin'ny steroid amin'ny fampiasana ny mponina
Ny hormones manan-danja indrindra amin'ny vatan'olombelona
9: vovony Drostanolone Propionate
Ny ankamaroan'ny Masteron rehetra eny an-tsena dia Drostanolone Propionate. Ny Drostanolone Propionate dia steroid steroid anabolika dihydrotestosteron (DHT). Voafaritra manokana, Masteron dia hormonina DHT izay namboarin'ny rafitry ny tarika metil ao amin'ny toeran'ny karbonina 2, miaro ny hormonina amin'ny fihanaky ny metabola ataon'ny 3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, izay hita ao amin'ny hozatra skeletal. Izy io koa dia mampitombo be ny natiora anabolic.
Ny ankamaroan'ny Estera an'ny Drostanolone ampiasain'ny atleta matihanina sy mpanao biriky
Ny androgenic indrindra indrindra
Iray amin'ireo malaza indrindra amin'ireo olona mifaninana na mitady azy
ho an'ny endrika haingo kokoa
10: vovony Methenolone Enanthate
Ny Methenolone Enanthate dia heverina ho iray amin'ny steroids anabolika azo antoka indrindra ao an-tsena ary mitondra salan'aretina tena mahomby izy ireo hamerina an'io fitakiana io. Raha ny tena izy, ity steroid ity dia nampiasaina tamim-pahombiazana amin'ny fitsaboana ny zaza tsy ampy saina sy ny zaza tsy ampy taona tsy misy fahavoazana. Nasaina ho an'ny osteoporosis sy sarcopenia koa izy io.
Ny ankamaroan'ny olona ampiasaina mandritra ny famoahana faribolam-bary, rehefa mahazo tombony maniry
Zava-miaina maharitra ela
Ny steroid anabolic amabolic izay tsy manan-tsahala raha oharina amin'ny steroids anabolic maro
Ny loharanom-pifanomezan-tragono azo antoka azo itokisana alohan'ny hividianana
Karohy ny karazana karazany amin'ny Steroids
Azonao atao ny mividy mora vovoka amin'ny Internet amin'ny serivisy ary ampitao an-tranonao tsy fantatra anarana. Na izany aza, tokony hanao fikarohana vitsivitsy alohan'ny hanomefanao ny vovo-dronono. Voalohany, fantaro raha mahazo vovon-tsirony tsara ianao. Raha manana namana ianao amin'ny gym izay mampiasa vovobony, dia fantaro hoe iza amin'ireo ampiasainy sy anontanio momba izay tsara indrindra ho an'ireo vao manomboka. Azonao atao ihany koa ny mangataka torohevitra avy amin'ireo mpanamboatra vatana amin'ny sehatra forum an-tserasera.
Ilaina ihany koa ny famakiana famerenam-bidy isan-karazany ny vovony. Ny manokana dia tokony ho hitanao hoe ahoana no fiasan'ny vovony mahery, ny karazana sakafo fihinana sy fanatanjahan-tena mandeha tsara miaraka aminy sy ny mety ho voka-dratsy mety. Raha manana fepetra efa misy mialoha ianao dia fantaro ny mety ho famongorana ny fampiasana ny vovon-tsirambina manokana mety hitranga.
Safidio ny mpamatsy Steroids azo itokisana
Aty Shina, misy orinasa maro manamboatra vovon-dronono amidy. Na izany aza, raha mividy ny gilasy steroid amin'ny Internet ianao, dia tsy ho azonao antoka mihitsy ny niandohan'ny famatsiana. Misy tsena lehibe ambanin'ny tany ho an'ny vovonin'ny stéroid eran'izao tontolo izao ary maro ny laboratoara ambanin'ny tany, indrindra fa avy any Eropa, no afaka mandefa vovon-tsirambina tsy ara-dalàna amin'ny lalàna. Ho fanasoavanao ny fahasalamanao dia tsara indrindra ny hanafatra vovo-dronono azo ekena amin'ny orinasa malaza.
Miaraha miasa aminay, azontsika atao amin'ny kely indrindra
Ny vokarintsika dia vokarina eo ambanin'ny cGMP ary ny vokatra dia azo zahana.
Ny fahadiovana dia manome antoka tsy latsaky ny 98%. mpianatra amin'ny fitantanana morontsiraka; HPLC; Azo omena ny tatitra momba ny fanadinana HNMR.
Azo antoka tsara ny fahaizantsika manome ary manao fandaharana matetika ny famokarana faobe.
Manana traikefa manankarena izahay amin'ny fanompoana tsena avo lenta manerana izao tontolo izao.
Miaraha miasa amin'ny orinasa izahay, afaka mampihena ny vidinao ianao.
Anabolic Steroids mangatsiaka mahazatra
F: Ahoana no hametrahana ny filaminana avy amin'ny orinasanao?
1. Azonao atao ny mandefa anay ny lisitry ny fividiananao amin'ny tranokalanay na amin'ny mailaka ([mailaka voaaro]), ny famakiana dia homena raha vao voaray.
2.Payment vita ary mpandray an-tsoratra omena.
3.Ny entana dia omena ny fanaraha-maso ny isa, ny sarin'ny fonosana, ny isa fanaraha-maso ary ny daty fahatongavana.
4.Goods nandray sy manome fanamarihana.
Q: Inona avy ireo fomba fandoavam-bola azon'ny orinasa omenao?
A: Famoahana banky; Western Union; MoneyGram; Bitcoin
Q: Ohatra azo ampiasaina?
A: Eny, ny ankamaroan'ny vokatra dia azo alefa ho ohatra maimaimpoana, fa rehefa mandoa ny vidin'ny fandefasana ianao.
Q: Ahoana no hiantohana ny kalitaon'ny vokatra alohan'ny fametrahana baiko?
A: COA, HPLC, HNMR dia misy. Ary omena fotoana isam-potoana ireo taratasy fanandramana amin'ny alàlan'ny labana avy fahatelo.
F: Ahoana no hiantohana ny volako?
A: Azo averina averina ny vola alohan'ny andefasana ny entana.
F: Ahoana ny momba ny fotoana fandefasana?
A: Tao anatin'ny 1 ~ 3 andro fiasa aorian'ny fanamafisana ny fandoavam-bola. (Fety sinoa tsy tafiditra).
Q: Misy fihenam-bidy ve?
A: Eny, ho an'ny habetsaka lehibe kokoa, manohana hatrany amin'ny vidiny tsara kokoa isika.
F: Azonao antoka ve ny fisian'ny famatsiana?
A: Ny fahaizan'ny mamatsy dia miorina mafy ary manomana famokarana faobe tsy tapaka.